Abouts | Fukang
20 taona hifantohana amin'ny tavoahangy plastika
Dongguan Fukang Plastic Products Co., Ltd natsangana tamin'ny taona 1999, any Guangdong, Sina ary mandrakotra 9000 metatra toradroa. Manokana amin'ny famokarana sy fanondranana tavoahangy PET sy HDPE samihafa izahay. izay ampiasaina indrindra amin'ny fivarotam-panafody sy indostrian'ny sakafo, ny sakafo rehetra dia kilasy fisakafoanana ary efa nandalo ny fanamarinana FDA, EU 、 LFGB, ary ny vokatray dia malaza be any Aostralia, Brezila, Kanada, Etazonia, India, Newsland, Mexico, Filipina sns
Ny tavoahangy Hdpe sy PET dia ampiasaina hanangonana vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, sakafo ara-tsakafo, famenon-tsakafo, kapsily, pilina ary takelaka sns.
Ny tavoahangin-tsakafo PET dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny karazan-tsakafo isan-karazany, toy ny vatomamy, cookies, sôkôla, voanjo, dibera voanjo ary zava-manitra sns.
Ny tavoahanginay plastika dia azo ampiasaina amin'ny tanjona manokana ihany koa, toy ny famonosana famantaranandro, T-shirt, kilalao, fanomezana, firavaka, fitaovam-pitaterana ary vokatra elektronika.
Manome serivisy OEM ihany koa izahay, toy ny fanaovana bobongolo vaovao sy ny pirinty fanontana ho volavolain'ny mpanjifa
Miarahaba anao izahay hiara-miasa aminay
Raiso ny santionany maimaimpoana
Afaka manome tavoahangy maimaim-poana izahay hizaha toetra kalitao.